PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-02-11 - Banqumela uzuma ugwayi katiki
Banqumela uzuma ugwayi katiki
Bathi akuphele impelasonto esephumile esikhundleni
Ilanga langeSonto - 2018-02-11 - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO
IZINHLANGANO isouth African Communist Party (SACP) necongress of South African Trade Unions (Cosatu) zithi azifisi kuphele le mpelasonto umengameli wezwe umnu Jacob Zuma, engadilikile esihlalweni.
I-SACP ithi umengameli weAfrican National Congress (ANC), umnu Cyril Ramaphosa kumele athathe isinqumo, enze isiqiniseko sokuthi ayipheli le mpelasonto umnu Zuma esengumengameli.
Izolo umnu Solly Mapaila obekhuluma emcimbini WE-SACP obusekhayelitsha, ecape Town, uthe bebengajabula ukuba umnu Zuma usehambile kwayimanje, wathi empeleni ukuphela kwempe-lasonto sekuyisikhathi esikude.
Umnu Sizwe Pamla wecosatu naye uvumelane nomnu Mapaila, wathi nabo abafisi kuphele le mpelasonto egoqwa namhlanje umnu Zuma esesezintanjeni.
Basho kanjena nje iningizimu Afrika ilindele ngabomvu isinqumo okubhekwe ukuba simenyezelwe YI-ANC mayelana nesikhundla sikamengameli Zuma.
Okucacile wukuthi kusukela udaba lokudilizwa kukamnu Zuma esikhundleni luqalile ukukhulunywa kodwa kunezinkomba zokuthi akazimisele neze ukwehla engalwile esihlalweni.
Ubunzima nobucayi bale ndaba kuze kwaholela ekutheni kuhlehliswe umcimbi obalulekile wokwethulwa kwenkulumo yokuvula iphalamende ecape Town, obekufanele ube ngolwesine, nokuyinto engakaze yenzeke selokhu kwangena uhulumeni wentando ye- niningi. Izolo ILANGA Langesonto lishicilele lapha lungakamenyezelwa usuku olusha okuzokwenziwa ngalo lo mcimbi.
Okugcine kuqinisekisiwe wukuthi umnu Ramaphosa uzoba ne- nkulumo azoyethula egrand Parade ekapa namuhla ntambama, ehambisana nomcimbi wokukhumbula ukuphuma kukamnu Nelson Mandela ejele.
Ngolwesihlanu kujike izinto njengoba inkosikazi kamengameli wezwe uthobeka Madiba-zuma ebhale ekhasini lezokuxhumana (Instagram) ukuthi kusazoshuba, wathi umnu Zuma uzokuqeda akuqalile ngoba akathathi miyale- phesheya kwezilwandle. Makhathaleni kuvele ezithi indodana kamnu Zuma ikhiphe isixoliso, ihlaba lo mbhalo ngokuthi awufanele.
Basho kanjena nje iningizimu Afrika ilindele ngabomvu isinqumo SE-ANC...
ISITHOMBE NGABE: SA BREAKING NEWS
ISACP izolo igcizelele ukuthi kufanele kuphele le mpelasonto ephumile umnu Jacob Zuma esihlalweni sokuba ngumengameli wezwe.